ဘာရိန်း Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ဘာရိန်းကျုံ့သွားစေပါတယ် - Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးကဘာရိန်း Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) option ကိုဘာရိန်းအသစ်တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျုံ့သွားစေပါတယ်၏အခွားတရားစီရင်မှုအတွက်ကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်အဓိကကုမ္ပဏီထံမှကွဲကွာနေသည်။ ထို့ကြောင့်အခြားဆဲလ်များကိုအခြားဆဲလ်ကနေသီးခြားပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် liabilities ရှိသည်, ဒါ commingled ဖြစ်လာပါဘူး။ တဦးတည်းဆဲလ်မရတဲ့အကြွေးတွေရှိတယ်လျှင်အကြွေးအခြားဆဲလ်ကနေခံစားရတဲ့နစ်နာမှုမရှာနိုင်ပါ။
အဆိုပါ Protected ဆဲလ် 2016 ၏ကုမ္ပဏီများဥပဒေ (လျှော့က "ကျုံ့သွားစေပါတယ်ဥပဒေ") ကိုဘယ်လိုကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့ပုံစံ, သီးခြား, လုပ်ရပ်အုပ်ချုပ်ခြင်း, ပျော်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်း။ ကျုံ့သွားစေပါတယ်ဥပဒေ "ဆဲလ်" ဟုခေါ်တစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူအမာခံပါဝင်သည်ဟုတဦးတည်းတရားဥပဒေဆိုင်ရာ entity (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) အတွက်ပေးစွမ်းသည်။ တစ်ဦးကကျုံ့သွားစေပါတယ်ဆဲလ်န့်အသတ်အရေအတွက်ကရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီကလာပ်စည်းသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါနေစဉ်, သူတို့ကတခြားဆဲလ်များ၏ liabilities တစ်ခုချင်းစီမှတဦးတည်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်းပတ်လည်လက်စွပ်-ခြံစည်းရိုးများလုပ်ပါ။ ကျုံ့သွားစေပါတယ်ဥပဒေကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့ထိန်းညှိရန်ဘာရိန်း၏ဗဟိုဘဏ် (CBB) ခွင့်ပြုပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့ core ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာများနှင့်တစ်ဦးချင်းဆဲလ်အားလုံးဝယ်ယူလိမ့်မည်။
ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့အနီးဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ကာတာတို့အကြားတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ငယ်လေး "ဘာရိန်း၏ဒမ်း" (အတိုကောက် "ဘာရိန်း") တွင်တည်ရှိသည်။ ရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အခါ 1932 ကတည်းကတစ်ဦးကရေနံကြွယ်ဝသောတိုင်းပြည်။
ဗြိတိသျှအော်တိုမန်အင်ပါယာကနေခွဲထုတ်ပြီးနောက်ဘာရိန်း 1913 တစ်ဦး "အစောငျ့အ" ကိုကြွေးကြော်။ အဆိုပါကာကွယ်စောင့်ရှောက်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအနေဖြင့်တစ်ဦးကျူးကျော်၏အမှု၌စစ်ရေးအကူအညီများနှင့်ကာကွယ်ရေးပါဝင်ပတ်သက်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကနေ 1971 အတွက်လွတ်လပ်ရေးရယူပြီးနောက်, အင်္ဂလိပ်အရာရှိတစ်ဦးကစက္ကန့်ဘာသာစကားအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကဘာရိန်း Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုထောက်ပံ့:
• နိုင်ငံခြားရေးရှယ်ယာရှင်များမှာ: ကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့ရှယ်ယာအားလုံးနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
• Protected ဆဲလ်: တစ်ဦးကလာပ်စည်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အခြားဆဲလ်များနှင့်ကျုံ့သွားစေပါတယ် core ကိုကုမ္ပဏီ၏ liabilities မှကာကွယ်လိမ့်မည်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: ကျုံ့သွားစေပါတယ်၎င်း၏ဆဲလ်ဒါမှမဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များကိုမဆိုအခွန်ပေးဆောင်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်အမေရိကန်နေထိုင်သူများနှင့်လူတိုင်းမိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
• နှစ်ဦးရှယ်ယာရှင်များမှာ / နှစ်ဦးဒါရိုက်တာများ: ကျုံ့သွားစေပါတယ်နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များရှိသည်နှင့်အတူတူပင်လူနှစ်ဦးဖြစ်နိုင်သူနှစ်ဦးကိုဒါရိုက်တာကိုခနျ့အပျဖို့လိုအပ်ပါသည်။
• အင်္ဂလိပ်: ဒုတိယအရာရှိတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား English အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများအင်္ဂလိပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခံရဖို့ခွင့်ပြုသည်။
အဆိုပါစကားများ "Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ် "ကျုံ့သွားစေပါတယ်" ၏ယင်း၏အတိုကောက်အဓိကကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုအဆုံးတွင်တည်ရှိရပါမည်။
ကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွင်းဆဲလ်တွေကိုဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် liabilities အဓိကကုမ္ပဏီနှင့်အခြားဆဲလ်များကိုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် liabilities ထံမှ segregated ရှိခြင်းများအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံသည်။ ဒါကအားလုံးကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့သီးခြားဆဲလ်သို့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် liabilities ၏ခွဲခြာနှင့်စပ်လျဉ်းသော "လက်စွပ်-ခြံစည်းရိုး" အဖြစ်လူသိများသည်။
ကျုံ့သွားစေပါတယ်ဥပဒေကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့ပုံမှန်ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး။ သို့သော်အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများတွင် "ခွင့်လှုပ်ရှားမှုများ" အဖြစ်လူသိများလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်:
•စုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်ချက် ( "CIU") ပုဂ္ဂလိကနေရာချထားမှုကိုမှတဆင့်အများပြည်သူထံမှမြို့တော်ပြုစုပျိုးထောင်အဖြစ် CBB နေဖြင့်သတ်မှတ်အပါအဝင်:
(က) ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာများနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြု. သလိုပဲ Venture မြို့တော်; နှင့်
(ခ) ရွေးနှုတ်တော်မူနေကြသည်သို့မဟုတ်-ဝယ်ယူနေသည့်ဆောင်ရွက်ချက်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထံမှ Holdings က။
•အ CBB နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ရန်ပုံငွေအဖြစ် CBB နေဖြင့်သတ်မှတ်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်ချက် ( "PIU") ။ PIU ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်။ $3သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ (သို့မဟုတ်အခြားငွေကြေးနှင့်ညီမျှ) ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးကနဦးပါဝင်မှု / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကျိုးစီးပွား။
•ဘဏ္ဍာရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတဆင့်ပိုင်ဆိုင်မှု Securitization (ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ် illiquid ပိုင်ဆိုင်မှု၏အုပ်စုတစုရှိမရှိ) လုံခြုံရေးသို့သူတို့ကိုငါပြောင်းလဲ။ ဒီအပေါင်ခံကျောထောက်နောက်ခံအာမခံပါဝင်နိုင်သည်။
•တစ်ဦးအာမခံကုမ္ပဏီထိန်းချုပ်ထားနှင့်၎င်း၏အာမခံကပိုင်ဆိုင်ဘယ်မှာသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအာမခံ။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အာမခံအချုပ်ခံရသောအာမခံ underwriting အမြတ်အစွန်းမှအကျိုးရှိရာပိုင်ရှင်များ '' အန္တရာယ်များကိုအာမခံထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
•နောက်ထပ်လုပ်ငန်းများကို CBB ခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်ခံရဖို့။
ကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့သီးခြားကုမ္ပဏီများမှဖွဲ့စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ၏အားသာချက်ကိုဆက်ကပ်။ အခွားသောအားသာချက်များကိုပိုကောင်းအချို့အန္တရာယ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်ထိရောက်မှု, ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကြားအန္တရာယ်များ၏ခွဲခြာနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဆောက်အဦကိုပါဝင်သည်။
တစ်ဦးကျုံ့သွားစေပါတယ်တည်တတ်၏ပြီးတာနဲ့ယခင်ကညှိနှိုင်းစာရွက်စာတမ်းများကို အသုံးပြု. အလားတူငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအချိန်ကုန်သက်သာစေရန်ထပ်တလဲလဲသုံးနိုင်တယ်။ တစ်ဦးကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေးတစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းရဲ့အလှူငွေနဲ့အစုစုတို့သည်အခြားသူများထံမှကွဲကွာနေကြဘယ်မှာတော်တော်များများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကအန္တရာယ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကျိုးတူအခြားလျော့နည်းအန္တရာယ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်ကွဲကွာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုဆဲလ်မဆိုမရတဲ့အကြွေးတွေပထမဦးဆုံးတိကျတဲ့ဆဲလ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုထဲကနေရှာကြရမည်ဖြစ်သည်သောဥာဏ်နှင့်တကွတတိယပါတီနှင့်အတူကျုံ့နိုင်ပါ။ ချည်းလျှင်အချိန်တန်သောဆဲလ်အတွက်မလုံလောက်သောပိုင်ဆိုင်မှုငှါ, ကြွေးရှင်ထို့နောက်အဓိက core ကိုကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကနေခံစားရတဲ့နစ်နာမှုတွေကိုရှာနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကြွေးရှင်အခြားဆဲလ်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိပြန်လည်ကုရှိပါတယ်။
၎င်း၏အကြွေးမှအသီးအသီးကလာပ်စည်းရဲ့ liabilities သာ၎င်း၏အကြွေးအားဖြင့်ချိတ်တွဲမှုများသို့မဟုတ်ဖမ်းဆီးရမိ၏တစ်ဦးတည်းသောအရင်းအမြစ်အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆဲလ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင်းအရွက်ရှိရာအချို့သောအခြားတရားစီရင်မှု။ ဘာရိန်း, အခြားတစ်ဖက်တွင်, တိကျသောဆဲလ်ဟာအကြွေးတွေပေးချေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပူးတွဲသို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းရမိခံရဖို့လုံလောက်သောပိုင်ဆိုင်မှုကင်းမဲ့လျှင်အမာခံကုမ္ပဏီထံမှခံစားရတဲ့နစ်နာမှုတွေကိုရှာအံ့သောငှါအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူအကြွေးပေးစွမ်းသည်။
ရှယ်ယာရှင်များ '' liabilities ကျုံ့သွားစေပါတယ်အတွက်ရှယ်ယာမြို့တော်ဆီသို့မိမိတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကိုဖို့ကန့်သတ်ထားပါသည်။
ကျုံ့သွားစေပါတယ်သစ်ကုမ္ပဏီများအနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှိပြီးသားကုမ္ပဏီက CBB ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျုံ့သွားစေပါတယ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
နယူးကုမ္ပဏီများဘာရိန်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းညွှန်ကြားမှုနဲ့အတူမှတ်ပုံတင်ရန်။ ခွင့်ပြုချက်အပျေါမှာသစ်ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်တရားဝင်ပြန်တမ်းထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။
နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်နှစ်ခုဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးဒါရိုက်တာများလည်စည်းမဲကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကနေထိုင်သူဒါရိုက်တာမလိုအပ်ပါ။ ဒါရိုက်တာဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်အပေါင်းတို့နှင့်နိုင်ငံများမှနိုင်ငံသားများရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးအားလုံးလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ file နိုင်ရန်အတွက်ကျုံ့သွားစေပါတယ်ဥပဒေနှင့် CBB ၏စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ခြင်းငှါခန့်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အတွင်းရေးမှူးရုံးမန်နေဂျာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
ကျုံ့သွားစေပါတယ်ဥပဒေအဘယ်အရာကိုအဓိကကုမ္ပဏီအတွက်လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးအရင်းအနှီးနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကလာပ်စည်းသတ်မှတ်မထားဘူးသော်လည်း, CBB တစ်ဦးချင်းစီ၏လိုအပ်သည့်နိမ့်ဆုံးမြို့တော်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးကဘာရိန်း Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း: နိုင်ငံခြားသားများ, တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်များအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုခြင်းဖြင့်စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှု, နှစ်ခုဒါရိုက်တာများဖြစ်နိုင်သူနှစ်ဦးကိုရှယ်ယာရှင်များ, အင်္ဂလိပ်ဒုတိယအရာရှိတဦးကဘာသာစကားများတဦးဖြစ်ပြီး, အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများ။